Ny fampaherezana azo avy amin’ny Salamo 23 (2)
"Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho." Salamo 23:1
"(Hoy Jesosy Kristy:) Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry." Jaona 10:11
"Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay." Jaona 10:27,28
Ny Salamo 23 no teny fantatra indrindra ao amin’ny Baiboly, ary na ireo izay tsy dia zatra firy mamaky Baiboly aza, dia mahafantatra azy. Mitondra fiadanam-po, fampaherezana ary fampiononana izy, amin’ireo fotoan-tsarotra eo amin’ny fiainana.
Davida, ilay mpiandry ondry nanjary mpanjakan’ny Israely taty aoriana, no nanao io salamo io. Nandalo fifaliana sy fahoriana tahaka antsika tsirairay izy. Notandindomin-doza lehibe maro izy, ary niaina fandresena sy faharesena. Io Salamo 23 io dia fanehoana fahatokiana tanteraka an’Andriamanitra (“Jehovah no mpiandry ahy”), fanehoana ny finoan’ny tena manokana.
Fantatra ny fikarakaran’ny mpiandry ny ondriny. Ny ondry mantsy dia biby saro-tahotra, very raha vao tafasaraka amin’ny andiany misy azy, ary tsy mahay miaro tena manoloana ny loza, na mpihaza izany, na andro ratsy, na aretina. Ny mpiandry ondry dia miambina, mitarika ny andian’ondry, mandroaka ny fahavalo, mitsabo ny ondry marary, mitady ny very ka mamerina azy. Ny eo akaikin’ny mpiandry azy no toerana azo antoka ho an’ny ondry. Raha manaraka azy ny ondry, dia ho tonga eny amin’ny ahi-maitso sy eny amin’ny rano hialany hetaheta. Ary ao anatin’ny toe-javatra faran’izay sarotra, ny lohasaha maizimaizina sy mampatahotra, dia eo anilan’ny mpiandry no hampitony azy.
“Ny lohasaha aloky ny fahafatesana” (and. 4) dia mety hampieritreritra tokoa ny fahafatesana, fetra mampangorohoro. Ny kristiana dia afaka miantehitra amin’ny fanatrehan’Ilay Andriamanitra Mpiandry tsara, dia Jesosy Kristy, Izay miteny momba ny ondriny hoe: “Tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako” (Jaona 10:28). Jesosy no hanampy ny mpino hanao io dingana sarotra io, mba hampiditra azy eo anilany any an-danitra, ilay tontolo feno fiadanana sy fahazavana.